I-27SiMn ipayipi yensimbi engenamthungo, oko kukuthi, i-27 ye-silicon manganese ipayipi yensimbi engenamthungo, yenye yezinto zombhobho wensimbi ongenamthungo, kwaye umxholo wekhabhoni uphakathi kwe-0.24-0.32%. I-SIMN idweliswe ngokwahlukileyo ngenxa yokuba umxholo we-silicon manganese kwizinto ezintlanu (i-carbon C, i-silicon Si, i-manganese Mn, i-phosphorus P, isulfure s) malunga ne-1.10-1.40%. I-27SiMn ipayipi engenamthungo ifanelekile kwiplanti yamandla, iplanti yebhoyila, imboni yeekhemikhali, isithuthi kunye nezixhobo zeenqanawa, njl.
27SiMn, umbhobho we-hydraulic strut. Ikhowudi yedijithali edibeneyo: a10272
Umgangatho: GB / t17396-2018
Olu hlobo lwentsimbi luneempawu ezingcono kune-30Mn2 zentsimbi, ukuqina okuphezulu, ubunzima obubalulekileyo ububanzi be-8 ~ 22mm emanzini, ukucwangciswa kakuhle, i-plastic deformation ebandayo ephakathi kunye ne-weldability; Ukongeza, ukuqina kwentsimbi akunciphi kakhulu ngexesha lonyango lobushushu, kodwa inamandla amakhulu kwaye iyakwazi ukumelana nokunxiba, ngakumbi xa kucinywa amanzi; Nangona kunjalo, le ntsimbi ivakalelwa kwindawo emhlophe, ukuvutha komsindo kunye nobushushu obugqithisileyo ngexesha lonyango lobushushu.
Olu hlobo lwentsimbi lusetyenziswa ikakhulu kwimeko ecinyiweyo kunye nenomsindo ukwenza iindawo ezishushu zokutsibela ezifuna ubunzima obuphezulu kunye nokumelana nokunxiba; Isenokusetyenziswa phantsi konikezelo oluqhelekileyo okanye olushushu oluqengqelekayo, olufana nephini lomzila wetrektara, njl.
Ukusetyenziswa kwepayipi ye-SIMN engama-27 engenamthungo kunye nombhobho wentsimbi oqhelekileyo
27SiMn umbhobho wentsimbi ongenamthungo
1. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wolwelo: GB / t8163-2018
2. Umbhobho wensimbi ongenamthungo kwibhoyila: GB / t3087-2018
3. Uxinzelelo oluphezulu lombhobho ongenamthungo kwibhoyila: GB / t5310-2018 (ST45.8 - uhlobo III)
4. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo ophakamileyo wezixhobo zesichumiso sekhemikhali: GB / t6479-2018
5. Umbhobho wensimbi ongenamthungo wokugrumba i-geological: yb235-70
6. Umbhobho wensimbi ongenamthungo wokugaya ioli: yb528-65
7. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wokuqhekeka kwepetroleum: GB / t9948-2018
8. Umbhobho okhethekileyo ongenamthungo we-petroleum drill collar: yb691-70
9. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo we-axle shaft yemoto: GB / t3088-2018
10. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo kwiinqanawa: GB / t5312-2018
11. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo opholileyo utsalwa ngokubanda uqengqeleke: GB / t3639-2018
12. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wepropu yehydraulic: GB / t17396-2018
Iipropati zoomatshini ze-27SiMn umbhobho wentsimbi ongenamthungo
Amandla okuqina σ b (MPa): ≥980
amandla esivuno σ s (MPa): ≥835
Ubude δ 5/(%): ≥12
Ukunciphisa indawo ψ/(%): ≥40
Impembelelo yamandla okufunxa (ixabiso lempembelelo) (aku2 / J): ≥ 39
Indlela yokuvavanya kwiipropati zoomatshini
Yonke imibhobho yentsimbi engenamthungo iya kuvavanywa kwiimpawu zoomatshini. Iindlela zokuvavanya iipropathi zoomatshini zohlulwe ikakhulu zibe ziindidi ezimbini: uvavanyo lwe-tensile kunye novavanyo lobulukhuni.
Uvavanyo lwe-tensile kukwenza umbhobho wentsimbi ongenamthungo kwisampulu, tsala isampuli ukuba iqhekezwe kumatshini wokuvavanya i-tensile, kwaye emva koko ulinganise enye okanye iipropathi ezininzi zoomatshini. Ngokuqhelekileyo, kuphela amandla okuqina, amandla esivuno, ubude emva kokuphuka kunye nokunciphisa indawo.
Uvavanyo lokuqina kukucotha ngokucothayo i-indenter eqinileyo kumphezulu wesampulu ngokwemiqathango echaziweyo, kwaye emva koko uvavanye ubunzulu bobunzulu okanye ubungakanani, ukuze ufumanise ubulukhuni bezinto.
Ukuchaneka okulungileyo, iplastiki ye-deformation ebandayo ephakathi kunye ne-weldability; Ukongeza, ukuqina kwentsimbi akunciphi kakhulu ngexesha lonyango lobushushu, kodwa inamandla amakhulu kwaye iyakwazi ukumelana nokunxiba, ngakumbi xa kucinywa amanzi; Nangona kunjalo, le ntsimbi ivakalelwa kwindawo emhlophe, ukuvutha komsindo kunye nobushushu obugqithisileyo ngexesha lonyango lobushushu.
Izilumkiso zokuhlolwa kokukhulisa okuphezulu kombhobho wentsimbi engenamthungo
Izilumkiso zokuhlolwa kokukhulisa okuphezulu kombhobho wentsimbi engenamthungo ikakhulu ziquka la manqaku alandelayo:
1. Ubunzulu kunye nobungakanani be-decarburization yomhlaba.
2. Ubude kunye nobunzulu beziphene zokuqengqeleka komhlaba, i-shrinkage cavity, ukwahlula phakathi kwekhabhoni kunye nesulfure.
3. Ukuhanjiswa kwe-ferrite kunye ne-pearlite kwipayipi yensimbi engenamthungo.
4. Ezinye iziphene ze-microstructure, kunye nobukhulu beenkozo, uburhabaxa bomphezulu wombhobho ongenamthungo kunye nomxholo wokubandakanywa.
Ngaphambili: Uqinisekiso lokwenyani lomgangatho wombhobho wentsimbi ye-ST52
Okulandelayo: Q345D ubushushu obuphantsi obuxhathisa umbhobho wentsimbi isiqinisekiso somgangatho
Umbhobho weSsimbi oMthungo weDiameter omkhulu otyebileyo
Umbhobho wentsimbi wentsimbi ongenamthungo weMall
Umbhobho wentsimbi ongenamthungo otyebileyo ochanekileyo
Umbhobho wentsimbi ongenamthungo oDonga
Umzi-mveliso wombhobho wentsimbi ongenamthungo oDonga oThiyeleyo
35CrMo ingxubevange yentsimbi umbhobho umenzi indawo warra...
Ukuqinisekiswa komgangatho we-alloy square tube fa...
Ukuthengiswa kwendawo yokuchaneka kweetyhubhu ezikhanyayo